पूर्व लडाकुको सम्झनामा जनयुद्ध | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
| बिहिबार, साउन २९, २०७७
पूर्व लडाकुको सम्झनामा जनयुद्ध
Published On : २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १०:१३
अश्विन दानी : २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि गोरखाका बिभिन्न बैङ्क, गैरसरकारी संस्थाहरु कब्जा गर्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीले १० बर्षे जनयुद्धको सुरुवात ग¥यो । देशमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउने भन्दै माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेपछि तत्कालीन सरकारका प्रहरीबाट २०५२ साल फागुन १४ गते गोली हानेर गोरखाका १४ बर्षीय दिलबहादुर रम्तेलको हत्या भयो ।
सूर्यज्योति माविका शिक्षक वीरबहादुर गुरुङलाई प्रहरीले विद्यालय हातामा आई पक्राउ गरेर लगेको र सो विद्यालयका विद्यार्थी प्रहरीको पछिपछि ढुंगामुढा गर्दै आएको दृश्य टौवामा चढेर हेरेका व्रह्मचारिणी निमाविका रम्तेलको प्रहरीको गोली लागी मृत्यू भयो । पछि उनी नै १० बर्षे जनयुद्धका प्रथम सहिद बन्न पुगे ।
१० बर्षसम्म चर्किएको जनयुद्ध २०६३ सालमा तत्कालीन सरकारसंग बृहत शान्ति सम्झौतापछि विधिवत रुपमा अन्त्य भयो । यस बीचमा सशस्त्र विद्रोही माओवादीका नेताकार्यकर्ता, काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा सर्वसाधारण जनता गरी १७ हजारभन्दा बढिको मृत्यू भयो । अनि हजारौँ बेपत्ता र अंगभंग भए । गोरखाका एक सय ८८ जना मारिए भने २४ जना बेपत्ता भए ।
जनयुद्ध शुरू भएको दिनलाई स्मरण गर्दै सँगै बन्दुक बोकेर भूमिगत जीवन बिताएका तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा रहेका नेता—कार्यकर्ताहरु अहिले छुट्टाछुटै पार्टीको कमाण्ड सम्हाल्दै २५ औं जनयुद्ध दिवस मनाईरहेका छन् ।
जनयुद्धका बेला लिएका उद्देश्यहरु प्राप्त भए या भएनन् भन्ने बिषयमा दरौँदी दैनिक पत्रिकाले गोरखाका पूर्व लडाकुहरुसँग गरेको कुराकानी ः—
जनयुद्धमा देखेको सपना पूरा भयो ?
१६ बर्षकै उमेरदेखि जनयुद्धमा लागेर ब्रिगेड कमाण्डरसम्म पुगेकी, जेलब्रेकरको इतिहास रचेकी कमला नहर्की भन्छिन् ः जनयुद्धपछि हामीले नेपालबाट राजतन्त्रलाई बिधिवत रुपमा हटाउन सफल भयौँ । महिला, दलित, उत्पीडनमा परेका वर्गहरुलाई तत्कालिन समयमा हेर्ने सामन्तवादको अन्त्य गरेर संबिधानबाट नै उनीहरुलाई बिभिन्न हक अधिकार दिन सफल भएका छौँ । अहिले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसरकारसम्म उत्पिडित क्षेत्र, जाति, बर्ग, लिङ्गहरुले समावेशिता पाईरहेका छन् । समाजका बिकृति बिसङ्गतिबिरुद्ध सबै नागरिकहरु आवाज उठाउन सक्षम भएका छन् त्यो पनि हाम्रो उपलब्धी हो ।
जनयुद्धपछि संबिधानले ब्यबस्था गरेको हक अधिकारहरु कार्वान्वयनको अबस्थामा थुप्रै चुनौतीहरु छन् । जनयुद्धको सुरुवात गर्दा जुन उद्देश्य हामीले लिएका थियौँ, त्यो पूर्ण रुपमा प्राप्त त भएको छैन । राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र त आयो तर हामीले त्यतिबेला जनतालाई भनेको जस्तो जनवादी सत्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । साम्यवादको सपना देखेर सुरुवात गरेको जनयुद्ध अन्त्य भएपछि अहिले हामी समाजवाद उन्मुख दिशामा अघि बढिरहेका छौँ । यद्यपि राजनीति र लक्ष्य उद्देश्य भनेको समय परिस्थिति अनुसार फेरबदल भईरहँदो रहेछ ।
तर, म भन्छु जनयुद्धका क्रममा हामीले लिएका उदेश्यहरु मध्य अब एक तिहाई मात्रै पूरा गर्न बाँकी छ । त्यो पनि पूरा गर्न सकिन्छ । समय छ । यस बिषयमा पार्टीले छुट्टै प्याकेज बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
द्वन्द्व पिडितहरुले उचित राहत पाएका छन् ?
१६ बर्षकै उमेरदेखि २०५५ साल यता जनयुद्धमा संलग्न घ्याल्चोकका सुरेन्द्र बिक भन्छन् ः जनयुद्ध लडेर अंगभंग भएका धेरैजसो साथीहरुको अबस्था अझैपनि दयनीय छ । १० बर्षे जनयुद्धमा घाइते भएकाहरुलाई, शहीद भएका र बेपत्ता भएकाहरुको परिवारहरु मध्य कमैले मात्रै उचित राहत पाएका छन् । जनयुद्धमा योगदान र बलिदान दिने साथीहरुको मुल्याङ्कन गरेर पार्टीले नै नयाँ खालको योजना बनाएर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
जनयुद्धका योद्धाहरु पिडा र समस्यामा बाँचिरहँदा हामीले देखेका सपना र जनयुद्धका उदेश्य पूरा भएको महसुस हुन सक्दैन ।
जनयुद्धमा नेतृत्व गरेकै ब्यक्तिहरु अझैपनि जनयुद्ध सफल भएको छैन भन्छन् नि !
१६ बर्षकै उमेरदेखि २०५६ सालयता जनयुद्धमा संलग्न भएका फुजेलका अशोक शर्मा भट्ट(नेपाल युवा संघका संयोजक) भन्छन्, ः जनयुद्धको उपलब्धीको बिषयमा गम्भीर समीक्षा पनि भईसकेको छ । जनयुद्ध तत्कालिन समयमा ठिक थियो । पछिल्लो समयमा नेपालको सापेक्षतामा दिर्घकालीन जनयुद्धलाई नै निरन्तरता दिँदा सफल हुन सकिँदैन, त्यसले झन ठूलो क्षति पु¥याउँछ । बन्दुकले लडेर देशमा उपलब्धी हाँसिल हुँदैन भन्ने कुरा बोध भएर त्यस बेला नै हामी शान्ति प्रक्रियामा आएका हौँ ।
तर, अहिले पनि केही साथीहरुले जनयुद्धका कुरा गरिराख्नु भएको छ । हिजोकै जनयुद्धकै प्रकृतिको लडाँईको अर्थ छैन अब । किनकी, हिजो राजतन्त्रको बिरुद्धमा लडेका हौँ । अहिले देशमा गणतन्त्र छ । अब को सँग ? कुन सत्ताको बिरुद्धमा लड्ने ? गणतन्त्रकै बिरुद्धमा लड्ने हो भने हामीले प्राप्त गर्नेचाँहि के हो ?
त्यसैले अबका दिनमा संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरु के छ ? नीति नियमहरुमा सरकारले कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ ? बाँकी रहेका कार्यलाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? भन्ने बिषयमा छलफल गर्न एउटा आधार तय भएको छ । त्यही आधारमा टेकेर बाँकी उपलब्धीहरुलाई प्राप्त गर्न एकजुट भएर अघि बढ्दा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तरुणदल गोरखाद्वारा बालमन्दिरका अनाथ बालवालिकालाई खाद्यान्न सहयोग
नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था तरुण दल गोरखाले बालमन्दिर माध्यामिक विद्यालयमा आबासिय रुपमा बस्दै आएका अनाथ
पालुङटार सिंचाई गर्ने योजना मोडालिटी मै अन्यौल
दराैँदी समाचारदाताः गोरखाको पालुङटार नगरपालिका क्षेत्र भित्रको एक हजार नौ सय सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई
दराैँदी समाचारदाताः गण्डकी प्रदेश सरकारले गोरखामा यसबर्ष शहरी विकास तथा भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम गर्नका
कम्प्यूटर सिक्दै शिक्षकहरु
दराैँदी समाचारदाताः गोरखाको भिमसेन थापा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ अश्राङको नबजागृती चण्डी माध्यामिक विद्यालयका शिक्षकहरु
दरौँदीमा बेपत्ता बालवकको शव अझै भेटिएन